Ny Fiarahana, Ny Namana, Ny Fitiavana — Ny Fanambadiana Sampan-Draharaha Ny Fihetseham-Po
Dokam-barotra avo roa heny sy ny tsy miankina ny Lehilahy, ny Vehivavy, ny Tokan-tena ny Ankizivavy. Isaky ny dokambarotra dia miaraka amin’ny mombamomba azy rehetra ny mombamomba ny tokan-tena marina sy voamarina. Ao ambadiky ny dokam-barotra ireo dia tena lehilahy sy ny vehivavy, ny olona ho zava-dehibe noho ny antony izay velona, ary koa ho velona dingana roa lavitra anao, ary nanapa-kevitra mba hahatonga ny fiovana ny amin ny fiainany manokana, ny mavitrika mitady fahasambarana. Mijery ny mombamomba tsy maika, vakio tsirairay ny endri-javatra, ny zavatra tiany, izay mitady. Raha misy olona mamely anao afaka mandao ny hafatra na tsotra fiarahabana avy eo dia, raha toa ianao ka liana, afaka mameno ny maimaim-poana manokana ad. Tsy milaza fa rehefa avy namaky ny mombamomba azy no teraka ny fitiavana amin’ny fahitana voalohany na ny tena fitiavana, ary inona no tena hitranga matetika eto, dia hihaona mahaliana ny olona ao amin’ny fivoriana eo amin’ny tokan-tena, ary avy eo dia eo amin’ny tena fiainana, dia matetika lasa misy zavatra bebe kokoa. Ny lahatra dia hafahafa, misy indraindray ny toe-javatra fa isika no tsy mijery eto, dia tonga soa ianao. Manasa anareo aho mba hahafantatra ny Fihetseham-po sy ny asa Tokan-tena Fikambanana. Iray monja tsindrio ny manomboka mba hahitana namana vaovao, mahaliana ny olona sy izay fantany.
Carla ny Fihetseham-po dia ny fanambadiana Masoivoho italiana, mafy orina sy matotra, nandritra ny taona maro, nanome alàlana ny Polisy foiben’ny italiana, sy ny tolotra matihanina services mba ho tokan-tena. Ny fahafahana Misafidy no tompon’andraikitra, amin’ny maoderina manan-danja tolotra ho an’ny tokan-tena, foana ny famoronana ho an’ny vehivavy sy ny lehilahy be dia be ny fahafahana mba hahafantatra ny tsirairay sy ny hihaona noho ny fikasana hanao ny namany, hizara ny tombontsoa na hanatanteraka ny nofy ny tena tantaram-pitiavana. Dia miasa eo amin’ny sehatry ny ara-pihetseham-po ary namana be dia be ny fitiavany sy ny maha zava-dehibe, mametraka ny ambony indrindra ny saina ho amin’ny filàna sy ny toetra ny tsirairay fanoratana ao amin’ny adidy hanaja ny fihetseham-pony. Isika dia ekipa za-draharaha matihanina sy ny mahay, ny hihaino sy mora mahatsapa ny zavatra ilainy rehetra, na dia ny nitaky ezaka lehibe indrindra ny olona. Avy amin’ny toro-hevitra tsotra ho an’ny tena ny fianarana, eto, dia atao foana ny miantehitra amin’ny olona iray tena afaka mihaino anareo sy hanome anareo ny tanana.
Leo ny mahazatra amin’ny chat
Diso fanantenana ny maro amin’ny chat virtoaly. Mieritreritra ve ianao fa mendrika ny tsara kokoa sy vonona ho velona, raha ny marina, ny Fihetseham-po, ny firehetam-po sy ny Fihetseham-po fa ny tsirairay amintsika dia ao am-po. Amin’ny Tokan-tena Fikambanana, ny fiarahana amin’ny sampan-draharaha manome ny Fihetseham-po, ny mpikambana sy ny tokan-tena, ny zava-baovao ny tolotra ao amin’ny ankehitriny, ary amin’izao fotoana izao, miara-mazava ho azy rehetra ny tena manome antoka fa ireo mampiavaka ny tena sampan-draharaha ho an’ny tokan-tena Fahefana. Tokan-tena Club dia tony ny tontolo iainana izay, ny tena tsiambaratelo sy ny fiainana manokana, ny fanaovana ny namana lasa mora dia azo tsapain-tànana ny valin ‘ny teny maro, ary mampanantena virtoaly: azo ampiharina sy ara-toekarena manifinify, amin’ny tena mpanolo-tsaina ao amin’ ny nofo sy ny taolana foana no vonona ho amin’ny isan-tokony. Amin’ny Tokan-tena Club hahafantatra ny tsirairay sy ny hihaona eo amin’ny tokan-tena lasa tena tsotra sy azo ampiharina. Tsotra, ahoana no mba haka ny kafe
← Ny amin'ny Chat roulette — chat an-tserasera ny lahatsary sy ny fivoriana
Mampiaraka Italiana Lahatsary Amin'ny Chat →